विशेष समाचार- Page3of 408 - Online Majdoor
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले मङ्गलबार ‘एक क्षेत्र–एक मार्ग’ (वन बेल्ट वन रोड) बारे नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग संयुक्तरूपमा सम्मेलन मङ्गलबार आयोजना ग¥यो । नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध...
हिजोआज क्यालिफोर्निया, ओरेगन र वाशिङ्टनमा फैलिरहेको डढेलो अथवा तटीय क्षेत्रमा आँधीबेहरीले मच्चाएको क्षतिभन्दा पर जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असर कल्पना गर्न गार्हो छ । भारत, पाकिस्तान र युरोपमा गर्मी अचाक्ली...
बलराज सहानीको जन्म सन् १९१३ मई १ को दिन रावलपिण्डीको एक पञ्जाबी परिवारमा भएको थियो । सन् १९२८ मा १५ वर्षको उमेरमा प्रवेशिका परीक्षामा बढी नम्बर ल्याएर उनी पहिलो श्रेणीमा...
कोभिड –१९ सङ्क्रमण रोक्ने नाममा भारतमा आयोजित गौमूत्र खाने समारोहमा सहभागी गुर्जो कति गुणकारी ? कलेजो रोग विशेषज्ञ (हेपाटोलोजिस्ट) डा. अनन्त श्रेष्ठले केही दिनअगाडि आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका छन्...
‘नाममा के हुन्छ र ? जसलाई हामी गुलाब भन्दछौँ, त्यसलाई अरू नै संज्ञा दिए पनि उत्तिकै मीठो सुवास दिन्छ क्यारे !’ शेक्सपियरको विश्व प्रसिद्ध नाटक रोमियो जुलिएटमा रोमियोको नाम...